देशैभर ५ लाख व्यक्तिले यसरी पाउँदैछन् सरकारबाट सहयोग, कस्ता व्यक्तिले पाउनेछन ? - ramechhapkhabar.com
देशैभर ५ लाख व्यक्तिले यसरी पाउँदैछन् सरकारबाट सहयोग, कस्ता व्यक्तिले पाउनेछन ?
कोरोना भाइरसको महामारीको कहरमा परेका ठूला व्यवसायी तथा व्यापारीले मोटो रकम राहत पाउँदा टुलुटुलु हेर्न बाध्य नागरिकलाई पहिलोपटक सरकारले सानै भए पनि सहयोग गर्ने भएको छ । संविधानमा समाजवाद लेखिए पनि व्यवहारमा राज्यका तर्फबाट राहत पाउन नसकेका अति विपन्न वर्गलाई १०/१० हजार रुपैयाँका दरले नगद अनुदान दिन लागिएको हो ।
दिनभर कमाएर साँझ–बिहानको छाक टार्नेको संख्या अत्यधिक छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको निषेधाज्ञाका कारण उनीहरू समस्यामा थिए ।
कोरोनाका कारण रोजगारी र आयआर्जनको अवसर गुमाएका अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रलाई यसअघि कुनै पनि रूपमा सम्बोधन गरिएको थिएन ।
पछिल्लोपटक वर्तमान सरकार गठन भएपछि ‘टोकन’कै रूपमा भए पनि ५ लाख परिवारलाई प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिन लागिएको छ । त्यसका लागि आवेदन दिन अर्थ मन्त्रालयले बिहीवार सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको छ ।
कोरोनाका कारण व्यवसाय बन्द भएका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत विभिन्न सुविधा दिएको छ । अतिविपन्न वर्ग तथा समुदायले भने राज्यका तर्फबाट कुनै पनि सहयोग नपाएको चौतर्फी गुनासोपछि वर्तमान सरकारले पूरक बजेटमार्फत राहत दिने व्यवस्था गरेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आवमा राहतस्वरूप एकपटकका लागि प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले नगद अनुदान दिन लागिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले आगामी १५ दिनभित्र स्थायी वा अस्थायीरूपमा बस्दै आएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले ‘कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८’ ले व्यवस्था गरेको अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा आवेदन दिनुपर्नेछ ।
गरीब, कम आय भएका, अति विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायाताका मजदुर, पर्यटक भरिया लगायतले त्यस्तो अनुदान पाउनेछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरूपमा गुमाएका र रोजगारीको अर्को अवसर समेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएका असंगठित क्षेत्रका मजदुर वा कामदारले नगद राहत प्राप्त गर्नेछन् । खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, आदिमा सामान बिक्री गर्ने अतिविपन्न व्यवसायी, कोभिड–१९ संक्रमणका कारणबाट आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नुपरेका परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारले पनि राहत पाउनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार निवेदन दिँदाको समयमा निवेदकको एक घरपरिवारका कुनै सदस्यले सरकारी, निजी वा अन्य कुनै संघसंस्था वा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरी आयआर्जन गरिरहेकाले भने त्यस्तो राहत पाउने छैनन् ।
सरकारले ७७ वटै जिल्लामा के–कति संख्यामा राहत उपलब्ध गराउने भन्ने निर्धारण गरिएको छ । नेपालमा कोरोना त्रास शुरू गरिएपछि पूरकसमेत गरी ३ वटा बजेट आए । ठूला व्यवसायीलाई सहजै राहत दिएको सरकारले दैनिक ज्यालादारीका लागि कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएन र सम्बोधन गर्न सकेन ।
कोरोनाको कहरमा सबैभन्दा बढी मारमा परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदाय नै दैनिक रोजीरोटी गर्नेहरू थिए । त्यही वर्गलाई सरकारले सम्बोधन गरेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।